Shiikh Xassan Daahir Aweys ayaa maanta mar kale waxaa uu ka warbixiyey xaalada dalka Soomaaliya uu siiyey mareegta Aljahad .com oo inta badan lagu qoro bayaanada iyo wararka ka soo baxa Ururka Al-Qaacida, Shiikh Xassan ayaa waxaa uu ka waramay dhibaada ka jirta soomaaliya isagoo eedo u soo jeediyey Dowllada Ingriisa iyo dowlladaha reer Galbeedka isagoo xusay in ay ku hayaan dagaal aan kala joogsi lahayn.
Warbixinta uu siiyey Sh Xassan Daahir Aweys mareegta aljahad.com ayaa waxaa uu ku celiyey in dowllada Federaalka ay tahay mid diinta ka baxday oo ridowday iyagoo hiil iyo taro siiyey gaalada ku soo duulay dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidanka AMISOM.
Sh Xassan Daahir Aweys ayaa qiray in degaano badan oo ay haysteen urura Al-shabaab ay ka baxeen gacanta Al-shabaab taasna ay ugu wacan tahay duulaanka gaalada iyo in taladii ka dhexeysay ururka lagu xadgudbiyey arrinkaas oo ah mid khilaafsan diinta Islaamka.
Shiikh Xassan Daahir Aweys ayaa mar kale cod dheer ku sheegay in culimadii , iyo waxgaradkii si qarsoodi ah loo laayey isagoo sheegay in la daadiyey dhiig xaaraan ah oo ay ugu horaysay dhiigii culimada Soomaali yeed. Ugu danbayntii ayaa Sheekh Xassan Daahir Aweys waxaa uu sheegay in Fatwo ayb soo saareen dhawaan oo ay kaga digayeen in la dili Abu Mansuur Al-amriiki aan dhag loo dhigin oo weli lagu dabo jiro la doonayan in la dilo arrinkaas oo uu sheegay in ay alle uga bari yihiin.
[audio:http://www.iwisc.net/hassauais/auais.mp3] Halkaan ka Dhagayso
Source :Aljahad .com